IMARA.EARTH ukuqala okulinganisa umthelela wezemvelo - iGeofumadas
IMARA.EARTH ukuqala okulinganisa umthelela wezemvelo
Mashi, 2021 Cartografia, cadastre, Geospatial - GIS
Okwe-6th edition Umagazini weTwingeo, sibe nethuba lokuxoxisana no-Elise Van Tilborg, ongu-Co-founder we-IMARA.Earth. Lesi siqalo saseDashi sisanda kuwina iPlanet Challenge eCopernicus Masters 2020 futhi sizibophezele ezweni elisimeme ngokusetshenziswa okuhle kwemvelo.
Isiqubulo sabo sithi "Bona ngeso lengqondo umthelela wakho kwezemvelo", futhi bakwenza ngemininingwane yokuzwa okukude njengezithombe zesathelayithi kanye nokuqoqwa kolwazi emkhakheni ukuthola imininingwane yokuhlela, ukuqapha kanye nokuhlola amaphrojekthi wokubuyiselwa komhlaba. Eminye yemibuzo ekhonjiswa kwinhlolokhono iqala ngokungaqiniseki kwe- Yini i-Imara.Earth? IMARA.earth, okusho ukuthi kuzinzile, kuqinile futhi kuqinile ngesiSwahili, kugxile ekulinganiseni umthelela wezemvelo ngobuciko bokuxoxa izindaba ukunika amandla ukuhlelwa kwephrojekthi okuqinile, ukuqapha nokubika.
I-IMARA akuyona inkampani ejwayelekile yokuzwa okukude noma inkampani yezokuxhumana.
IMARA.Umhlaba nesidingo esikhuthaze ukwakhiwa kwawo. U-Elise nethimba lakhe baphawule ukuthi babona inani ledatha elitholakala ezinhlanganweni nokuthi alisetshenziswanga kahle, kuxhashazwa amandla alo ayi-100%. Ngalesi sizathu, banqume ukudala le nkampani ukuphatha idatha ngaphansi kwamazinga wokuqapha kanye nokuhlola, ngaphezu kokufakwa kwezithombe ukukhiqiza imininingwane ephelele yezemvelo ephelele.
U-Elise usitshele ukuthi esinye sezizathu zakhe zokudala i-IMARA kwakuwumqondo wakhe wokuthi idatha yendawo kufanele isetshenziselwe ukuxhasa amaphrojekthi athuthukisa ikusasa elizinzile lomhlaba. Yena kanye nomsunguli wakhe uMelisa ngezifundo ze-International Land and Water Management, kamuva ezahlanganiswa ne-Master's Degree ku-GIS naku-Remote Sensing,
Izithombe zihlanganiswe nolwazi lwangempela lwendawo ziholela olwazini nasolwazini oluningi nolunenhloso ngesikhathi sokuhlela, ukuqapha kanye nokuhlola amaphrojekthi wokubuyiselwa komhlaba.
Njengakwezinye izinkampani, lolu bhubhane lwaba nomthelela omncane emisebenzini yabo, kepha bathola nezinye izindlela zokuqhubeka nalo, ngokufaka abantu bendawo emsebenzini wasensimini kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi wokuqashelwa okubonakalayo. Konke lokhu okungenhla kube nomphumela wohlaka olubanzi lokuqapha nokuhlola olwaholela esimweni esinothisayo senkampani. Kwa-IMARA bazibophezele ekubuyiseleni iplanethi, ukukhuthaza imisebenzi yokubuyiselwa kanye nokuthola umthelela wale misebenzi ngokuhlanganisa imininingwane yangempela kusuka endaweni yedatha kanye nedatha yokuzwa kude.
Ukuzwa okukude kufakazele ukuthi kuyasebenziseka kuzo zonke izigaba zokuthuthukiswa kwephrojekthi hhayi nje ukuthola umthelela ngokwakho.
Ungavakashela amanethiwekhi omphakathi e-IMARA ku LinkedIn noma iwebhusayithi yakho IMARA.earth ukuhlala unolwazi ngayo yonke imisebenzi yakho. Akunasidingo sokukumema ukuba ufunde lolu hlelo olusha lweTwingeo Magazine. Siyakhumbula ukuthi sikulungele ukuthola amadokhumende noma okushicilelwe ofisa ukukukhombisa kumagazini. Xhumana nathi nge-imeyili editor@geofumadas.com kanye edit@geoingenieria.com. Lo magazini ushicilelwa ngendlela yedijithali -kuhlole lapha- Ngabe ulindeni ukulanda i-Twingeo? Silandele ku-LinkedIn ukuthola ezinye izibuyekezo.
cadastre Drone Ama-Geomatics I-GIS
Thumela Previous«Langaphambilini Izindaba zezamabhizinisi. Ukulele.com
Post Next I-Fuzzy Logic RoboticsOkulandelayo »